यो जोडीको बिहेपछि खिचे यस्तो फोटो ? किन भयो यति धेरै आलोचना ?
बीबीसी- बिहेपछिका आफ्ना विशेष तस्बिरहरूबारे सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएपनि ती तस्बिर नहटाउने भारतीय जोडीले बीबीसीलाई बताएको छ।छ।
एक भारतीय जोडीले बिहे गरेपछि खिचाएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको तीब्र ट्रोल गरिएको थियो। तस्बिरहरूमा लक्ष्मी र हृषी कार्थिक सेतो सिल्कको ओढ्नेमा बेरिएर घना चियाबारीमा हाँस्दै, अँगालो मा-र्दै र एक अर्कासँग लुकामा-री खेलेको देखिन्छ।
“हाम्रा परिवारले हामीलाई परिचय गराइदिएपछि हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्न थाल्यौँ,” उनले भनिन्। हृषी टेलिकम कम्पनीमा काम गर्छन् र लक्ष्मीले इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ डिग्री भर्खर सकेकी छन्।
एप्रिलमा शानदार बिहे गर्ने यो जोडीको योजना महामा-रीले तुहाइदिएको थियो। मार्चको अन्त्यतिर भारतमा कडा लकडाउन लगाइयो र कोरोनाभाइरस फैलिनबाट रोक्न सबै खाले जमघटमा प्रतिबन्ध लगाइयो।
प्रतिबन्ध खुकुलो हुँदै जाँदा बिहेका स-साना जमघट गर्न अनुमति दिइयो। त्यसैकारण हृषी र लक्ष्मीले सेप्टेम्बरमा एउटा मन्दिरमा बिहे गरे।
उनीहरूले होटलको ओढ्ने केही समयका लागि मागे र फोटो खिचाए। लक्ष्मीले भनिन्, “कस्तो रमाइलो भएको थियो। हामी साँचिकै उत्साहित थियौँ र त्यो हाम्रो हनीमूनको एउटा अंश थियो।”
ट्रोलमा ती फोटोहरू नराम्रा, अ-श्लील, लाजम-र्दो रहेका भनियो। कतिले ती तस्बिरहरू पो र्नोग्राफिक भएको र उनीहरू क न्डोमको विज्ञापनका लागि ठिक हुने बताए, कतिले उनीहरूलाई एउटा कोठा लिन सुझाव दिए।
धेरैजसो दुर्वचनहरू आफूप्रति लक्षित रहेको लक्ष्मी बताउँछिन्। उनी भन्छिन् “त्यो मेराप्रति असाध्यै नराम्रो थियो। मेरा श्रीमान् भन्दा बढी मप्रति दु र्व्यवहार लक्षित थियो। उनीहरूले मलाई पो र्न फिल्ममा खेल्न भनेका थिए। मेरो बेइज्जत गर्ने प्रयत्न गरियो।”
तर आफूहरू फोटो नहटाउनेबारे दृढ रहेको यो जोडी बताउँछन्। “यदि हामीले हटायौँ भने उनीहरूले त्यसलाई गल्तीको महसुस गरेको भन्ने रूपमा लिनेछन्,
“शुरूमा हामीलाई आलोचनासँग जुझ्न मुस्किल भएको थियो तर अहिले बानी परिसक्यो। समाज यस्तै हो हामीले यो सँग जिउन सिक्नुपर्छ।